Hasnaine Yavarhoussen – Hakanto Contemporary (MG)
Hasnaine Yavarhoussen no Tale Jeneraly ny Groupe Filatex ary nanorina ny Fonds Yavarhoussen. Mahatsapa fa ny kanto sy ny kolontsaina dia andry lehibe ho an’ny fampandroasana, ny FYH dia manome toky amin’ny fanandratana ny tontolon’ny kanto sy kolontsaina Malagasy.
Ny taona 2019, ny Fonds Yavarhoussen dia nanohana ny trano heva voalohan’i Madagasikara tamin’ny Biennale de Venise faha-58 niaraka tamin’ny mpanakanto Joël Andrianomearisoa. Ny taona 2020 no niarahan’izy ireo nanorina ny Hakanto Contemporary ao Antanananarivo, toerana voalohany natao ho an’ny kanto, taranja rehetra mifangaro (tsy hitadiavam-bola), natokana hanandratana ny lanjan’ny kanton’ny vanim-potoana ankehitriny Malagasy sy manolotra toeram-piofanana ho an’ny mpanakanto.
Nampandroso sy nampivelatra ny Groupe Filatex, orinasam-mpianakaviana, teo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena i Hasnaine Yavarhoussen ka nahatonga ny sampany misahana ny angovo ho mpamokatra angovo mahaleo tena lehibe indrindra ao Madagasikara. Nitantana sy nandrindra asa soa maro eo anivon’ny Groupe Filatex i Hasnaine Yavarhoussen ary nanatontosa fandaharan’asa soa 32 ao Madagasikara.
Ny taona 2018 sy 2019 i Hasnaine Yavarhoussen dia voafantina tamin’ny Choiseul 100 Africa, izay manaiky sy mandahatra ny mpitarika Afrikanina 200 latsaky ny 40 taona.